Kooxaha Shrewsbury Town Iyo Liverpool Ayaa Barbaro Wada Galay Xili Kooxda Kulan Kale Lagu Balansan Yahay Anfield. | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Kooxda Shrewsbury Town ayaa Liverpool ku qasabtay in kulkan ku celis ah lagu ciyaari doono Anfield iyada oo kooxdii uu Klopp u soo xushay kulankani ay lumiyeen hogaan laba gool ahaa.
Kooxda Shrewsbury Town ayaa ka soo kabsatay 2-0 ay Liverpool guul ugu taagnayd waxayna kooxda Klopp sabab iskugu noqotay in kulan kale oo ku celis ah ay Shrewsbury Town kula ciyaari doonaan Anfield.
Jamaahiirta kooxda Shrewsbury Town ayaa sida daadka ugu soo butaacay garoonka isla markii uu garsooruhu ciyaarta dhameeyay iyaga oo si layaableh ugu dabaal degay soo laabashada ay kooxdoodu samaysay.
Daqiiqadii 15 aad da’yarkii jamaahiirta Liverpool dareenka wayn kaga helay kulankii Merseydide Derby ee Everton ee Curtis Jones ayaa markale noqday xidiga Reds goolka furitaanka kulankan uga dhayay kadib markii uu caawin fiican ka helay da’yarka kale ee edro Chirivella.
Si kastaba ha ahaatee, qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 ay Liverpool hogaanka ciyaarta ku haysay balse ayna natiijada ciyaarta xaqiijisan.
Difaaca uu Klopp midigta ka soo ciyaarsiiyay ee Willims ayaa kubbad ku soo karoosay xerada ganaaxa laakiin Donald Love ayaa si layaableh goolkiisa kubbada ugu dhaliyay, waxayna ciyaartu noqotay 2-0 ay Reds hogaanka ku dheeraysatay. halkan hoose ka daawo goolkan.
Daqiiqadii 64 aad rekoodhe!! Kooxda Shrewsbury ayaa ugu danbayn heshay goolka ay fursadaha badan u soo khasaariyeen kadib markii da’yarka Liverpool ee Yasser Larouci lagu ciqaabay in uu galay qalad rekoodhe keenay waxaana goolka xamaasada waalida ah abuuray u dhaliyay Cummings oo jahada qaldan u diray goolhaye Adrian.
Daqiiqadii 75.aad Kooxda Shrewsbury ayaa si layaableh ciyaarta ugu soo laabtay kadib markii uu Jason Cummings dhaliyay goolkiisa labaad isaga oo si xun u bahdilay Dejan Lovern wuxuuna sidaa ku dhaliyay goolka ay Shrewsbury ay ciyaarta kaga dhigtay barbaro 2-2 ah.
Liverpool iyo Shrewsbury ayaa dhamaadkii ciyaarta fursado fiican helay laakiin ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay barbaro 2-2 ah iyada oo Reds lagu qasbay in ay kulan ku celis ah ku ciyaari doonaan Anfield iyada oo jamaahiirta kooxda Shrewsbury Town ay garoonka hal mar soo wada galeen markii uu garsooruhu ciyaarta dhameeyay.